Global Voices teny Malagasy » Famoretana ao Beijing: ‘Mampidi-doza kokoa noho ny fihetsiketsehana an-dalambe ny misera amin’ny Twitter’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Famoretana ao Beijing: ‘Mampidi-doza kokoa noho ny fihetsiketsehana an-dalambe ny misera amin'ny Twitter’
Voadika ny 12 Desambra 2018 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Sary namboarina avy amin'ny mpisera Flickr mkhmarketing CC: AT Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Natomboky ny manampahefana ao Beijing ny famoretana manerana ny firenena ireo Shinoa mpisera Twitter ao amin'ny Tanibe.
Manome antsipiriany ny fahoriana mianjady amin'ireo mpisera Twitter an-jatony nohazonina na nanaovan'ny polisim-pirenena hatramin'ny septambra 2018 ny fijoroana vavolombelona miisa 42 nivoaka tamin'ny 5 desambra nangonin'ny China Change , tranonkala shinoa fanandratana ny zon'olombelona. Amin'ny ankamaroany ny polisy nangataka — raha tsy nanery — ireo mpisera ireo hamafa ny lahatsoratra na ny kaonty.
Na dia voasakana aza ny Twitter any Shina tanibe, dia maro amin'ny mpiserasera no nampiasa fitaovam-pihodidinana, toy ny VPNs (virtual private networks) hitsidihana ilay sehatra media sosialy, hifandraisana amin'ny namana na ahazoana ireo torohay sy vaovao tsy voasakan-tsivana.
Tombanana ho 10 tapitrisa ny isan'ny mpisera  Twitter ao Shina tanibe tamin'ny taona 2016. Ny ankamaroan'ireo mpisera ireo mampiasa ny tranonkala ho fitaovam-panangonam-baovao, ka mitandrina mihitsy tsy haneho hevitra, fa misy ireo tsy mahatam-bava, mavitrika amin'ny fanehoan-kevitra mitsikera rehefa mampita vaovao any amin'ny namany.
Efa nisambotra mpisera Twitter teo aloha ny manampahefanan'ny Shina tanibe, saingy tsy nisy ny sary mazava na porofo fisian'ny famoretana maty paika. Tsindraindray sy kisendrasendra ihany no nahitana toe-javatra, tahaka ny fisamborana shinoan'ny tanibe mpisera Twitter tamin'ny taona 2012 izay nananihany  tamin'ny fidarabohan'ny Efitra lehiben'ny Kongresim-bahoaka.
Fivoarana vaovao sy mampanahy ny famoretana mitranga amin'izao fotoana izao. Mitranga manerana ny firenena ilay izy ary tsy voafetra amin'ny tranga na fihetsika an-tserasera. Tombanana ho an-jatony na mihoatra ny isan'ireo mpisera Twitter voarahona mivantana.
Araka ny tatitra avy amin'ny Radio Free Asia , Nihazona ireo mpisera Twitter maniva-peo manerana an'i Shina ka ao anatin'izany i Beijing, Chongqing, Guangdong, Shandong, Fujiang, Hubei ary ireo faritany hafa ny manampahefana ao amin'ny fiarovana an-tserasera. Ny sasany nohazonina vonjimaika ara-panjakana nandritra ny 10 andro. Mpisera iray tsy nanaiky hiara-miasa amin'ny manampahefanan'ny fiarovana an-tserasera no nosamborina ary hiatrika fitsarana tsy ho ela.
Tsy misy ny torohay ofisialy amin'ny famoretana Twitter. Saingy ny ezaka fanangonan-drakitra  nataon'ny China Change no nahafahanay hamaky ireo fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpisera Twitter voasambotra sy ireo namany, maneho jery ankapobe amin'ny famoretana media sosialy farany indrindra ao amin'ny firenena.
Fisamborana amin'ny ‘tsaho ara-politika’
Nosamborin'ny manampahefana ara-piarovana ao an-toerana miisa 30 tamin'ny 31 oktobra ny mpisera Twitter @Xybaiyun2018. Nodarohana izy ary nohazonina 10 andro. Hitan'ny polisy ny tenimiafina Twitter ary nofafany avokoa ny votoaty rehetra navoakany. Nandritra ny famotorana nilaza ny polisy fa tsy ara-dalàna ny mampita “tsaho ara-politika”. Navoitran-dry zareo fa ny fampitan'i @Xybaiyun2018 ny tsanganana navoakan'i Guo Wengui, miliaridera shinoa voampanga ho nanao kolikoly, nandositra nankany Etazonia tamin'ny taona 2014 ary fantatra tamin'ny sioka milaza fisian'ny kolikoly ao amin'ny antoko komonista shinoa.
Nanitrikitrika i @Xybaiyun2018 fa tsy nanitsakitsaka ny lalàna iadiana amin'ny tsaho, izay manery fa izay hafatra rehetra ahitana “tsaho” ka nozaraina mihoatra ny in-500 dia mety mahatonga ho any amin'ny fitsarana. Nilaza ny lalàna fa izay sombin-torohay rehetra  izay tsy nivoaka avy amin'ny fantsom-baovao ofisialin'ny governemanta dia azo heverina ho tsaho.
Tao anaty fiafenan'anarana hatry ny ela ilay bilaogera no nisioka tamin'ny alalan'ny findainy. Mihevitra izy fa nahafantatra azy tamin'ny alalan'ny teknolojia fanarahamaso ny finday ny polisy.
‘Mampididoza noho ny fihetsiketsehana an-dalambe ny misera Twitter’
Tsy izay tsanganana na toe-javatra navoakan'ny mpisera vao haingana ihany no sahanin'ilay famoretana amin'ny Twitter. Araka an'i @asn_213, afa-mitsongo dia ny hetsika nataon'ireo mpisera Twitter an-tserasera mihoatra ny dimy taona ny polisy:
Natontany pirinty avokoa ireo zavatra rehetra tany amin'ny 5 na 6 taona miompana amin'ny famoriana fiaraha-misakafo [ao anatin'ny Hetsik'Olom-pirenena Vaovao] ao an-tanàna, ary natontany pirinty ihany koa ny sioka sy ny fampitan-tsioka rehetra nataoko. Nolazain-dry zareo fa ireny no porofon'ny asan-jiolahy nataoko. Tamin'ny 10 ora alina, nanao famotorana ahy indray ny manampahefana ara-politika an-dry zareo, nanome ahy ny tenimita ihazonana ahy mandritra ny 15 andro. Voasoritsoritra ao anatin'izany aho fa manimbazimba ny mpitarika ao amin'ny firenena ary mamely ny rafitra ara-politika misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny Twitter.
Mpisera Twitter @419041838 namoaka tamin'ny namany fa nosamborina izy, natao famotorana ary norahonana, ary sioka an'arivony maro no nofafana. Noraketina an-dahatsary avokoa ny nanaovana izany rehetra izany. Nolazainy tao amin'ny efitra fanaovana karajia:
Mbola tsy azonareo foana ve ry zalahy fa mampidi-doza ny misera Twitter, mampidi-doza kokoa noho ny fihetsiketsehana an-dalambe.
Hatramin'ny tsy nahafahana niditra Twitter tao Shina, tsy dia manam-pahafahana loatra io hiantraika amin'ny politika ao an-toerana. Manasarotra ny mahita hoe nahoana ny manampahefana no mitohy amin'ny fanaovana izao famoretana izao. Ny loharanom-baovao avy amin'ny tranonkalam-panandratana ny zon'olombelona shinoa Weiquan Wang  no nilaza fa mety nohafainganin'ny fotoam-pivoriana ampahibemaso faharoa ataon'ny komity foibe faha-19 ny Antoko tokana  tamin'ny faran'ny volana Novambra 2018 izao. Angamba te-hiantoka ny manampahefana ao amin'ny fiarovana an-tserasera fa tsy hisy feo manivaka hanimba ny lazan'i Xi Jinping ao anatiny sy ivelan'i Shina.
Raha tsy mbola voamarina izany tanjon'ny famoretana izany, dia nasehon'ny manampahefana shinoa fa afa-mamantatra sy mahita ny toerana misy ireo mpisera Twitter manivaka amin'ny fitenenana ao Shina ry zareo. Asehony amin'izany fa ny fahaiza-manaon'ny sampan-draharahan'ny fiarovana Shinoa dia ahafahany manitatra ny fanaraha-maso ataony sy ny fandrahonana ireo mpiseran'ny sehatra media sosialy ampitan-dranomasina tahaka ny Twitter, fa tafiditra amin'izany ihany koa ireo mpisehatra lehibe tahaka ny Facebook, Instagram, aary ireo fitaovana fampitan-kafatra tahaka ny LINE sy ny WhatsApp.
Efa mihamivelatra ivelan'i Shina ankehitriny ireo fampiasa maro made-in-China [Vita ao Shina] tahaka ny WeChat, Weibo ary Alipay, izay samy efa manana ny lazany amin'ny tsy fanajana ny fiainana an-takonan'ny mpisera ao aminy. Manahy ny sasany fa mety ahafahan'ny manampahefanan'ny fiarovana an-tserasera shinoa hanitatra ny ambaindainy izany ary handrahona ireo vondrom-piarahamonina shinoa ampitan-dranomasina. Mety ho misy karazana famoretana mampanahy kokoa ny fanafoanana  vao haingana ny fampirantiana ara-javakanto nataon'ilay mpanao sariitatra shinoa monina ao Aostralia antsoina hoe Badiucao tao Hong Kong tamin'ny volana lasa teo sy ny nampiatoany ny famoahany votoaty tao amin'ny Twitter .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/12/131834/
 tatitra avy amin'ny Radio Free Asia: https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/meiti/nu-11162018103506.html
 izay sombin-torohay rehetra: https://advox.globalvoices.org/2013/09/05/hundreds-arrested-for-spreading-rumors-on-chinas-ideological-battlefield/
 ny famoahany votoaty tao amin'ny Twitter: https://twitter.com/badiucao